Wasiirka Gaashaandhigga oo kulan la yeeshay Ergeyga Qaramada Midoobey u fadhiya Soomaaliya – Radio Muqdisho
Wasiirka Gaashaandhigga oo kulan la yeeshay Ergeyga Qaramada Midoobey u fadhiya Soomaaliya
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur (Jaamac), ayaa kulan miro dhal ah la yeeshey Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey u fadhiya Soomaaliya.
Wasiirka iyo Ergeyga gaarka ayaa waxay kawada hadleen sidii loo dardar gelin lahaa Qorshaha Kala-guurka iyo sidii Ciidanka Xoogga Dalka ay ula wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka.
Waxay sidoo kale labada masuul isla garteen in lasii kordhiyo Dib u habeynta ciidamada iyo sare u qaadidda howlgallada Amisom.
Ugu dambeyntiina wuxuu Wasiirka u caddeeyey wakiilka Qaramada Midoobay inay ka go’an tahay Dowladda Federaalka in Ciidanka Xoogga aan loo adeegsan Siyaasad gaar ah, ayna kuna ekaadaan waajibaadkooda Qaran.
Wuxuu uga mahadceliyay Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay taageerada ay lagarab taagan yihiin sidii Ciidamada Soomaaliya ay u hanan laheyd amniga dalka.
Wasaaradda Caafimaadka oo kulan soo dhaweyn ah u sameysay howlwadeenno Caafimaad “SAWIRRO”
Wasaaradda Caafimaadka oo kulan soo dhaweyn ah u sameysay howlwadeenno Caafimaad "SAWIRRO"